शोभित बस्नेतलई ठूलो झड्का,उनको फिल्म 'डाँडाको बरपिपल' हेर्न ६ जना दर्शक !
शोभित बस्नेतलई ठूलो झड्का,उनको फिल्म ‘डाँडाको बरपिपल’ हेर्न ६ जना दर्शक !
काठमाडौं । महानायक राजेश हमाल नभई भुवन केसी हुन् भन्ने निर्देशन शोभित बस्नेतलई ठूलो झड्का लागेको छ । लामो समयको अन्तरालमा दशैंको फूलपाती देखि एउटा नयाँ नेपाली चलचित्र हलमा रिलिज भयो ।
शोभित बस्नेत निर्देशित चलचित्र ‘डाँडाको वरपिपल’ रिलिज भएको दोस्रो दिन सिभिल मलको क्यूएफएक्समा पुग्दा हलभित्र हेर्दा विरक्तलाग्दो दृष्य देखियो । सिंगै हलभित्र जम्माजम्मी ६ जना दर्शक थिए । ४ जना वयस्क र २ जना बालबालिका ।
त्यसो त डाँडाको वरपिपल रिलिज हुनुपूर्व नै फ्लप बन्ने छनक देखिएको थियो । राजेश हमालको महानायकत्वमाथि प्रश्न उठाएकाले भुवन, शिव र शोभितसँग दर्शक आगो बनेका थिए ।
राजेश हमालका समर्थक दर्शकले यस चलचित्रका गीतमा ‘डिसलाइक’ को अभियान नै चलाएका छन् । साथै, युट्युटदखि टिकटकसम्म आएका प्रतिक्रियामा धेरैले यो चलचित्र बहिष्कार गर्ने बताएका छन् ।
चलचित्रको लगानी धरापमा पर्ने देखेपछि निर्देशक बस्नेतले आफूलाई सच्याउन पनि खोजेका हुन् । आफूले गल्ति बोलेको भनेर माफी मागे । चलचित्रको एउटा कार्यक्रममा राजेश हमालको तस्वीरलाई प्रमूख अतिथि बनाए ।
एक टिभी प्रस्तोताको मध्यस्थतामा राजेश हमालको प्रवचन पनि सुने । तर केही गर्दा पनि दर्शक उनीसँग खुशी भएनन् । अहिले पनि शोभितमाथि गालीको वर्षा भइरहेकै छ । उनीमात्र नभएर राजेश हमाललाई महानायक नमान्ने जोकसैलाई दर्शकले लखेटिरहेका छन् ।